Liliphi Ithemba Ngookhokho Bam Abafileyo? Ngaba Baza Kuvuswa?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMaya IsiMoore IsiMyanmar IsiNdebele IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
NGAXA lithile kwapapashwa umxholo otshis’ ibunzi kwiphephandaba laseKorea iThe Chosun Ilbo. Wawusithi, “‘UShim Cheong Olungileyo,’ Owayengazi Nto NgoYesu—Ngaba Waya Esihogweni?”
Lo mxholo wawurhuq’ umrhaji kuba kwiintsomi zaseKorea, uShim Cheong lo yintwazana elungileyo encam’ ubomi bayo ukuze incede uyise oyimfama. Kangangeminyaka le ntwazana ibinconywa kakhulu. Kangangokuba eKorea, “uShim Cheong” ungumzekelo wentwazana ezinikeleyo.
Abaninzi bebeya kuthi yinkohlakalo de ibacaphukise into yokuba kuthiwe umnt’ olunge kangaka uza kutshiswa esihogweni kuba nje engengomKristu obhaptiziweyo. Ngaphezu koko, eli bali kuthiwa lenzeka kudala ngaphambi kokuba abantu belali yakhe beve ngoKristu.
Kweli nqaku kwadliwanw’ indlebe nomnye umfundisi. Wabuzwa ukuba baza kutsh’ esihogweni na bonke abantu abafe bengakhange bafumane thuba lokufunda ngoYesu? Waphendula wathini? Wathi, “Asazi. Sicing’ ukuba uThixo unecebo [ngabantu abanjalo].”
OKO UMNTU AMELE AKWENZE UKUZE ASINDISWE
IThe New Catholic Encyclopedia ithi: “Umntu umele abhaptizwe ukuze asindiswe. Njengokuba noKristu watshoyo, ukuba umntu akakhange azalwe ngamanzi nangoMoya Oyingcwele, akanakungena eBukumkanini bukaThixo (Yoh 3:5).” Ngenxa yoku, abaninzi bacinga ukuba abantu abafe bengabhaptizwanga batsha esihogweni okanye bangcungcutheke ngandlel’ ithile emva kokufa.
Noko ke, abaninzi bathi bubuxoki obu. Izigidi zabantu zife zingazi nto ngeBhayibhile. Ngaba ziza kungcungcutheka esihogweni ngonaphakade? Ithini yona iBhayibhile?
IBhayibhile ithi uThixo akabalahlanga abantu abafe bengenalwazi ngemithetho yakhe. IZenzo 17:30 zithi: “UThixo uye akawananza amaxesha okungazi okunjalo.” Ngoko ke, iBhayibhile ithi liyintoni ithemba labo bafe bengakhange bafunde ngoThixo?
Wayethetha ukuthini uYesu xa wathi: “Uya kuba nam eParadesi”?
Impendulo ifumaneka koko uYesu wakuthethayo komnye wabenzi-bubi ababexhonywe kunye naye. Le ndoda yathi kuYesu: “Uze undikhumbule xa uthe wangena ebukumkanini bakho.” Waphendula wathini uYesu? “Inene ndithi kuwe namhlanje, Uya kuba nam eParadesi.”—Luka 23:39-43.
Ngaba uYesu wayesithi le ndoda iza kuya ezulwini? Hayi. Le ndoda ayizange ‘izalwe kwakhona’ ngamanzi nomoya, nto leyo eyayifuneka ukuze ingene eBukumkanini bamazulu. (Yohane 3:3-6) Kunoko, uYesu wayethembisa lo menzi-bubi ukuba uza kuphila kwakhona “eParadesi.” Njengoko yayingumYuda, le ndoda yayiqhelene neParadesi yasemhlabeni, umyezo wase-Eden ochazwe kwincwadi yokuqala yeBhayibhile. (Genesis 2:8) La mazwi kaYesu ayiqinisekisa ngethemba lovuko xa sele kubuyiselwe iParadesi emhlabeni.
Enyanisweni, iBhayibhile ithembisa ukuba kuza kubakho “uvuko lwamalungisa nabangengomalungisa.” (IZenzo 24:15) “Abangengomalungisa” ngabo bangafundanga ngemiyalelo kaThixo ngenxa yokuba bebengazi ngenjongo kaThixo. UYesu uza kumvusa la menzi-bubi ungelolungisa wayethetha naye, kunye nezinye izigidi okanye iibhiliyoni ezife zingazi nto ngoThixo. Kamva, kwiParadesi esemhlabeni, aba bantu baza kufundiswa ngemiyalelo kaThixo baze babonise ukuba bayamthanda uThixo ngokuthobela imiyalelo yakhe.
XA KUVUSWA ABANGENGOMALUNGISA
Xa abangengomalungisa bevuswa, ngaba baza kugwetywa ngokwezenzo zabo zangaphambili? Hayi. AmaRoma 6:7 athi: “Lowo uye wafa ugwetyelwe kwisono sakhe.” Abangengomalungisa baya kube bezihlawulele izono zabo ngokufa kwabo. Ngaloo ndlela, baya kugwetywa ngokwezenzo zabo emva kokuba bevukile, kunokuba bagwetywe ngenxa yoko bakwenza bengazi ngaphambi kokufa kwabo. Baza kungenelwa njani?
Emva kovuko, abangengomalungisa baza kufundiswa imithetho kaThixo, eza kuchazwa emva kokuvulwa kwemisongo. Baya kwandula ke bagwetywe “elowo ngokwezenzo zakhe,” kuthatyathelwa kwinto yokuba bayithobele kusini na imithetho kaThixo. (ISityhilelo 20:12, 13) Kuninzi lwabo bangengomalungisa, eli ayizukuba lithuba lesibini kodwa elokuqala lokuba bafumane ubomi obungunaphade emhlabeni ngokufunda nokwenza oko kufunwa nguThixo.
Le mfundiso yeBhayibhile iye yanceda abaninzi ukuba babe nokholo kuThixo. UYeong Sug ngomnye wabo. Ukhule engumKatolika kwintsapho yabefundisi. Naye wayezinikele ecaweni de waya nakwikhaya loonongendi. Kodwa ethubeni waqhwesha kuba edaniswe kokwakusenzeka apho. Enye into eyambangela waqhwesha, kukuba wayengayamkeli imfundiso yesihogo, ekujonga njengenkohlakalo ukuthuthunjiswa kwabantu emlilweni.
Elinye iNgqina likaYehova lafundela uYeong Sug la mazwi aseBhayibhileni: “Abaphilayo bayazi ukuba baya kufa; kodwa abafileyo, abazi nto konke konke, abasenamvuzo.” (INtshumayeli 9:5) Lamnceda waqonda ukuba ookhokho bakhe abathuthunjiswa esihogweni. Endaweni yoko, balele ekufeni belinde uvuko.
Ekubeni uYeong Sug esazi ukuba abantu abaninzi abazange bayive inyaniso eseBhayibhileni, wazimisela ukuba enze oko kwathethwa nguYesu kuMateyu 24:14 esithi: “Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela.” Ngoku ushumayela iindaba ezilungileyo ezingethemba elimangalisayo eliseBhayibhileni.
“UTHIXO AKAKHETHI BUSO”
IBhayibhile ithi: “UThixo akakhethi buso, kodwa kwiintlanga zonke umntu omoyikayo aze asebenze ubulungisa wamkelekile kuye.” (IZenzo 10:34, 35) Sonke sinokulindela ukuba uThixo asiphathe ngaloo ndlela, kuba “uthanda ubulungisa nokusesikweni.”—INdumiso 33:5.
Text Iimpapasho onokuzikhuphela IMBONISELO Juni 2014 | Indlela UThixo Akujonga Ngayo Ukutshaya